Shiinaha Walnut Peptide warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Huayan
Waxyaabaha laga helo: Borotiinka walnut
2.Horumarinta caqliga iyo hagaajinta awooda barashada;
3.Kordhi dhibaatooyinka hurdada;
4.Anti-oxidation si looga hortago cudurka Alzheimers;
5.Hormarinta nidaamka dheef-shiidka iyo kor u qaadista nuugista nafaqooyinka;
6.Caawinta daaweynta cudurada wadnaha iyo xididada wadnaha;
7.Kordhiyaa difaaca jirka;
Ka-hortagga kansarka, wuxuu joojiyaa koritaanka unugyada kansarka
Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cuntada, qurxinta, dawooyinka iyo qeybaha kale.
Qalabka heerka koowaad, qalabka ceyriinka ah iyo tikniyoolajiyadda horumarsan, shirkaddu waxay muhiimad weyn siineysaa xakamaynta tayada iyo maaraynta dhammaan howlaha wax soo saarka, waxayna ku dadaaleysaa inay ku guuleysato sida ugu fiican dhammaan xiriiriyeyaasha si loo hubiyo tayada alaabada ugu dambeysa.
3.Garanti tayo leh
5.Provde waqti-buuxa ah adeegyada-iibka kadib.
Hore: Caanaha loo yaqaan 'Soybean Peptide'
Xiga: Bovine Collagen Peptide